နဗီတမန်တော်အစ္စမာအီးလ် (အ) အကြောင်း | Pure Sunni (Ya Robbae Salle Wasllim Ala Mohamadin)
← မီးကျင်းရှင် အတ်စွဟာဗေ အွခ်ဒူးဒ်
လူတစ်ယောက်ရဲ့အရှက်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေမယ့်ကိစ္စကို ဖုံးဖိပေးနိုင်တဲ့သူကို အရှင်မြတ်က ကေယာမတ် တရား စီရင်မယ့်နေ့မှာထိုသူ့ရဲ့ အရှက်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ် →
Posted on November 6, 2013	by puresunni
တမန်တော် အစ္စမာအီးလ် (အ) သည် တမန်တော်အီဗရာဟီးမ် (အ) ၏သားတော်ဖြစ်သည်။ နဗီတမန်တော်အီဗရာဟီးမ်၏ အသက်တော်ကိုးဆယ့်ကိုးနှစ် (၉၉) နှစ်၊ နောက်အဆိုအရ သက်တော်ခြောက်ဆယ်လေးနှစ် (၆၄) နှစ် အရွယ်တွင် တမန်တော်အစ္စမာအီးလ် (အ) အား “ဘီဘီဟာဂျေရာဟ်“ သခင်မမှ ဖွားမြင်တော်မူခဲ့သည်။ သူမသည် တမန်တော်အီဗရာဟီးမ် (အ) ၏ကြင်ယာတော် ဘီဘီဆာရာဟ်သခင်မ၏ ကျေးကျွန်မတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမကားဘီဘီဆာရာဟ် သခင်မက ခင်ပွန်းသည် တမန်တော်အီဗရာဟီးမ် (အ) အား အပိုင်ပေးအပ် ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ အချုပ်အရ ပြောဆိုရသော် “ဘီဘီဟာဂျေရာဟ်“ သခင်မသည် တမန်တော် အီဗရာဟီးမ် (အ) ၏ ဒုတိယကြင်ယာတော်ဖြစ်သည်။ သို့ရှိရာ နဗီတမန်တော်အစ္စမာအီးလ် (အ) မှာ ဒုတိယကြင်ယာတော်မှ ဦးစွာဖွားမြင်ခဲ့သော သားတော်ဖြစ်သည်။
နဗီတမန်တော်အစ္စမာအီးလ် (အ) သည် နို့စို့အရွယ်ဘဝ၌ ရှိစဉ်က ဖခင်၏ ပထမကြင်ယာတော် ဘီဘီဆာရာဟ်သခင်မ၏ ဇွတ်ပြုခြင်းနှင့် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်ကျရောက်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ဖခင်တမန်တော်အီဗရာဟီးမ် (အ) သည် သားတော်ကြီး အစ္စမာအီးလ် (အ) နှင့် ၄င်း၏ မိခင်ဘီဘီဟာဂျေရာဟ်သခင်မတို့အား လူသူကင်းဝေးပြီး ခြောက်သွေ့ သော ကန္နာရကွင်းပြင်ကြီး တစ်ခု၌ သစ်ပင်တစ်ပင်၏ အရိပ်အောက်တွင် သွားရောက်စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ (၄င်းနေရာသည် လက်ရှိဆော်ဒီ အာရေဗျ နိုင်ငံ မက္ကာမြို့ရှိ ကာ့အ်ဗာကျောင်းတော်တည်ရှိနေသည့် နေရာပင်ဖြစ်သည်။)
သားအမိနှင့်ပါးတို့အား စွန့်လွှတ်ခဲ့ရာတွင် စွန်ပလွန်သီးအနည်းငယ်သာ ပါရှိသော အိတ်တစ်လုံးနှင့် ရေပုံးတစ်ပုံးခန့်သာ ထားပေးခဲ့လေသည်။ မကြာမီ သောက်ရေမှာ ကုန်ခမ်း သွားလေသည်။ နို့စို့အရွယ်ပင်ရှိနေသည့် တမန်တော်အစ္စမာအီးလ် (အ) သည် မိခင်ထံမှ နို့ချိုလည်းမရသောအခါ သောက်ရဆာလောင်ခဲ့သည်။ ရေဆာခြင်းသည် မခံခရပ်နိုင်အောင် ပြင်းထန်ခဲ့လေသည်။ မိခင်ကြီး ဟာဂျေရာဟ် သခင်မခမြာမှာ မည်သို့မျှ မတတ်နိုင်ရှာ၊ ၄င်းကိုယ်၌ပင် ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်၏ ဒဏ်ကို အပြင်အထန်ခံစားနေရသည့် အခြေအနေ၌ရှိခဲ့သည်။
သို့ရှိရာ ဘီဘီဟာဂျေရာဟ်သခင်မသည် အနီးအနားရှိ “စွဖာ” နှင့် “မရ်ဝါဟ်” မည်သောတောင်ကုန်းနှစ်ခုအကြား ပြေးလွှားလိုက်၊ တောင်ကုန်းတစ်ခုချင်းအပေါ်သို့ တက်လိုက်နှင့် ခရီးသည်အဖွဲ့များတွေ့လျှင် ၄င်းတို့ထံမှ သောက်သုံးရေကို ရရှိနိုင်ရန် အပြင်းအထန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့လေသည်။
နောက်ဆုံးတွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် တမန်တော်အစ္စမာအီးလ် (အ) ၏ခြေဖနောင့်များ ပွတ်သပ်ခဲ့သည် မြေနေရာမှ အစ္စလာမ့်သမိုင်းဝင် “ ဇမ်ဇမ်ရေအား” ဆူပွက်၍ထွက်စေခဲ့သည်။
ထိုနေရာ၌ တမန်တော်အစ္စမာအီးလ် (အ) နှင့်မိခင်၊ ဘီဘီ ဟာဂျေရာဟ် သခင်မတို့နေထိုင်ခဲ့ကြသည့်အခါ ထိုပတ်ဝန်းကျင်မှ “ဂျွတ်ရ်ဟွမ်း” အမျိုး အနွယ်ဝင်မှ ပုဂ္ဂိုလ် များသည် ခရီးသွားလာရင်း ထိုနေရာသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြလေသည်။ ထိုအခါ (ဇမ်ဇမ်)ရေကန်ရှိသည့် နေရာပေါ်၌ ငှက်များပျံဝဲနေကြသည်ကို ၄င်းတို့ တွေ့မြင် ကြလေသည်။ ဤမြင်တွင်းကြောင့် ဂျွတ်ရ်ဟွမ်းအမျိုးအနွယ်ဝင်ခရီးသည်များမှာ အလွန်အံ့အားသင့်သွားခဲ့ကြလေသည်။ သို့သော် ဤနေရာ၌ မိုင်ပေါင်းတစ်ထောင်မျှ ပတ်ဝန်းကျင် အတွင်းရေကန်တစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်လည်း ယခုဤငှက်များ ပျံဝဲနေခြင်းမှာ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ထိုသို့ပြောဆိုပြီးလျှင် မိမိတို့အဖွဲ့မှ အချို့သော သူ များအား သတင်းစုံစမ်းရန် အနီးပတ်ဝန်းကျင်သို့ စေလွှတ်ခဲ့ကြရသည်။ ထိုသို့ စုံစမ်းခဲ့သည်အခါတွင် “ဇမ်ဇမ်” ရေကန်ရှိကြောင်းကို ဂျွတ်ရ်ဟွမ်းအမျိုးအနွယ်ဝင်များ သိရှိခဲ့ကြသည်။ ၄င်းတို့သည် ဘီဘီဟာဂျေရာဟ် သခင်မထံမှ ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူကာ ၄င်းနေရာ၌ပင် စခန်းချနေထိုင်ခဲ့ကြ လေသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ တမန်တော်ချုပ် မိုဟမ္မဒ် (စွလလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစ္စလာမ်) သခင်ဖွားမြင် တော်မူခဲ့သည့် မက္ကာရွှေမြို့တော်သည် စည်ကားသိုက်မြိုက်၍လာခဲ့သည်။
နဗီတမန်တော်အီဗရာဟီးမ် (အ) သည် ကြင်ယာတော် ဟာဂျေရာဟ်သခင်မနှင့် သားတော်ကြီး အစ္စမာအီးလ် (အ) တို့အား လူသူကင်းဝေးသည့် ကန္နာရကွင်းပြင်ကြီးသို့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်အရ စွန့်လွှတ်ခဲ့သောလည်း လစဉ်တစ်ကြိမ်ကျ လာရောက်၍ ကြည့်ရှုတော်မူလေ့ရှိသည်။ သားတော်ကြီး တမန်တော် အစ္စမာအီးလ် (အ) အရွယ်ရောက်လုနီးအချိန်တွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်တစ်ရပ်မှာ တမန်တော်အီဗရာဟီးမ် (အ) ထံကျရောက်ခဲ့လေသည်။ ၄င်းမှာ သားတော်အစ္စမာအီးလ် (အ) အား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ နှစ်သက်မှုရယူရန်အတွက် ဇဗာလ်ပြုလည်လှီးရန်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အမိန့်ကျရောက်လာသည်နှင့် တမန်တော်အီဗရာဟီးမ် (အ) သည် သားတော်အား ဇဗာဟ်ပြုလည်လှီးရန် လည်ဂုတ်ပေါ်သို့ဓားတင်၍ လှီးဖြတ်လေသည်။ သို့သော် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ဂျန္နတ်သုခဘုံမှ “ဒွန်ဘာ“ (သိုးကဲ့သို့သော) သားကောင် တစ်ကောင်အား အစားထိုး၍ လည်လှီးစေခဲ့ပြီး တမန်တော်အစ္စမာအီးလ် (အ) အား ဇဗာဟ်ပြုလည်လှီးစေခြင်းမှ ချမ်းသာမှု ပေးသနားတော်မူခဲ့လေသည်။
ထိုဇဗာဟ်ပြုလည်လှီးခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့်ဖြစ်ရပ်ကို အကြောင်းခံ၍ တမန်တော်အစ္စမာအီးလ် (အ) သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်ပါးမှ “ဇဗီဟွလ္လာဟ်” မည်သော ဘွဲ့ထူးကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံရလေသည်။
ဗိုင်တွလ္လာကာ့အ်ဗာကျောင်းတော်ကြီးသည် အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များ ဝတ်ပြုကြရန် ဒွန္နီယာလောက၌ ပထမဦးဆုံး တည်ဆောက်ခဲ့သော ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကြီးဖြစ် ခဲ့သည်။ ၄င်းကျောင်းတော်ကြီးအား ဦးစွာပထမ ဖခင်ကြီး တမန်တော်အာဒမ် (အ) ကအနီရောင်ပတ္တမြားများဖြင့် တည်ဆောက်တော်မူခဲ့လေသည်။
နဗီတမန်တော်နူးဟ် (အ) ၏ တောင်းဆိုချက်ကြောင့် တိုက်ခတ်ခဲ့သော မုန်တိုင်းကြီး ကျရောက်သည့် အချိန်၌ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်ဖြင့် ကောင်းကင် တမန်တော်ဖရေရ်ှတာများသည် “ဗိုင်တွလ္လာ” ကာ့အ်ဗာကျောင်းတော်ကြီး၏ အုတ်မြစ်များ သည် မြေဖုံးသွားခဲ့လေသည်။
တမန်တော်အစ္စမာအီးလ်(အ) သက်တော်နှစ်ဆယ် (၂၀) နှစ်ရောက်သောအခါ မိခင်ကြီး ဟာဂျေရာဟ်သခင်မသည် သက်တော်ကိုးဆယ် (၉၀) နှစ်အရွယ်၌ အလ္လာဟ် အရှင်မြတ် ၏ အမိန့်ကို ခံယူခဲ့သည်။ သားတော်အစ္စမာအီးလ် (အ၀ သည် ကျေးဇူးရှင် မိခင်ကြီးအား ဟဂ်ျရေအဆ်ဝါ့ဒ် (ကျောင်းနက်ကြီး) အနီး၌ မျက်ရည်များစီးတွေ လျက် ဒဖန်ပြုခဲ့လေသည်။
တမန်တော်အစ္စမာအီးလ် (အ) သက်တော်သုံးဆယ် (၃၀) နှစ် အရွယ် ရောက်သည့်အခါ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်ပါးမှ တမန်တော်အီဗရာဟီးမ် (အ) ထံဗိုင် တွလ္လာဟ်ကျောင်းတော် အား ၄င်း၏ အုတ်မြစ်ပေါ်၌ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် အမိန့်ကျရောက်လာခဲ့သည်။ တမန်တော်အစ္စမာအီးလ် (အ)၏ အကူအညီဖြင့် ကာ့အ်ဗာကျောင်းတော် အား စတင်တည်ဆောက်လေသည်။
သားတော်အစ္စမာအီးလ် (အ) သည် မက္ကာရွှေမြို့တော်၏ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ရှိသော် (၁) ဟေရာ(၂) လဗ်နာန်၊ (၃) ဆိုဗိုင်းရ်၊ (၄) ဂျုဒီ၊ (၅) သူးရ်မည်သော တောင် ငါးတောင်မှ ကျောက်တုံးများကို သယ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
တမန်တော်အစ္စမာအီးလ် (အ) ၏ နေကာဟ်ထိမ်းမြားခြင်း
တမန်တော်အစ္စမာအီးလ် (အ) အရွယ်ရောက်ပြီးနောက် ပိုင်းတွင် ဂျွတ်ရ်ဟွမ်း အမျိုးအနွယ်မှ အမျိုးသမီးချောတစ်ဦးနှင့် နေကာဟ် ထိမ်းမြားမှု ပြုပြင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၄င်းဇနီးမှာ ကျေးဇူး မသိတတ်သောကြောင့် နဗီတမန်တော်တစ်ဦး၏ ကြင်ယာတော်ဖြစ်ရန် မထိုက်တန်သူ ဖြစ်သဖြင့် တမန်တော်အီဗရာဟီးမ် (အ) ၏ အကြံ့ပေးချက်အရ ထိုဇနီးသည်အား တွလားက်ကွာ ရှင်းခဲ့လေသည်။
ကာ့အ်ဗာကျောင်းတော်အား တည်ဆောက်ပြီးနောက်အစ္စမာအီးလ် (အ) သည် ၄င်းကျောင်းတော်အား တာဝန်ယူ၍ စောင့်ရှောက်ခဲ့သည်။ ကျောင်းတော်အား သန့်ရှင်းခြင်း၊ တံမြက်လှဲခြင်း၊ အေဗာဒတ်သ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အခြားသူများအား တိုက်တွန်းခြင်း၊ သဝါ့ဖ်လှည့်ပတ်ခြင်းနှင့် အခြားသူများအား သဝါ့ဖ်ပြုလုပ်ရန် တိုက်တွန်းခြင်းတို့၌ အချိန်ကို ကုန်ဆုံးစေခဲ့လေသည်။
တမန်တော်အစ္စမာအီးလ် (အ) သည် သက်တော်တစ်ရာ့သုံးဆယ်ခုနှစ် (၁၃၇) နှစ်အရွယ်တွင် ဒွန္နီယာလောကမှ စွန့်ခွာရန် အချိန်နီးကပ်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်၌ မိမိသားတော်ကြီး ဆာဗစ်သ်အား ကာ့အ်ဗာကျောင်းတော်၏ အုပ်ထိန်းမှုကို လွှဲအပ်ပေးခဲ့လေသည်။ ညီတော်တမန်တော်အစ္စဟားက် (အ) အား၎င်း၏ သာအိုင်း(စ်) နှင့် မိမိ တစ်ဦးတည်းသောသမီးဖြင့် နေကာမင်္ဂလာဆောင်နှင်းပေးရန် မှာကြားပေးခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်ကို ခံယူခဲ့လေသည်။ တမန်တော် အစ္စမာအီးလ် (အ) သည် ပထမကြင်ယာ တော်အား တွလားက်ပေး ကွာရှင်းပြီး နောက် “ဝါ့အ်လာ” အမည်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ဒုတိယနေ့ကာဟ် ထိမ်းမြားမှုဖြစ်ခဲ့လေ သည်။ ၄င်းကြင်ယာတော်မှ သမီးတော်တစ်ပါးနှင့် သားတော်နှစ် ပါးထွန်းကားခဲ့လေသည်။
တမန်တော်အစ္စမာအီးလ် (အ) အားမိခင်ကြီး ဟာဂျေရာဟ် သခင်မ၏ ဂူဗိမ္မာန်အနီး မီဇားဗ်နှင့် ဟဂ်ျရေအတ်စ်ဝါ့ဒ်အကြား ဒဖနာပြုခဲ့သည်။
မီဇားဗ်သည် ဗိုင်တွလ္လာဟ်ကျောင်းတော်၏ ရေတံလျှောက်ဖြစ်ပြီး ဟဂ်ျရေအဆ်ဝါ့ဒ်မှာ ဗိုင်တွလ္လာဟ်ကျောင်းတော်၏ နံရံ၌ ကပ်ထားသော ကျောက်နက်ကို ခေါ်ဆိုပါသည်။
mymmif.com မှ ကူးယူ ဖေါ်ပြသည်။ ….
This entry was posted in တမန်တော်ကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.